Vimba iWebhusayithi yethu kwamanye amazwe | Iindaba zeGajethi
Indlela yokuvimba ukufikelela kwiwebhusayithi yethu kwamanye amazwe
Ukuba unayo ibhlog okanye iwebhusayithi kwaye uyafuna vimba ukufikelela kulwazi lwakho kwinani elithile labasebenzisi Kwiindawo ezahlukeneyo zeplanethi, ungakufezekisa oku ukuba nje ungumphuhlisi wewebhu kwaye uyazi ezinye iinkqubo kunye nezixhobo ezikwi-Intanethi.
Ngelishwa ayinguye wonke umntu onolu hlobo lolwazi, kwaye ke kufuneka azame Sebenzisa izixhobo ezilula ukuqondakala. Iya kuba yinjongo yeli nqaku, kuba apha siza kuthetha ngezixhobo ezithile onokuzisebenzisa ukunqanda ukufikelela kwiwebhusayithi yakho, kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba.
1 Kutheni uvimba ukufikelela kwiwebhusayithi kwimimandla ethile?
3 Iibhloko ze-IP zelizwe
5 Isoftware77 IP kwindawo yogcino lwedatha yelizwe
Kutheni uvimba ukufikelela kwiwebhusayithi kwimimandla ethile?
Zininzi izizathu ezinokubangela ukuba uzame ukwenza olu hlobo lomsebenzi, nangona okwangoku siza kuphakamisa umzekelo omncinci onokuthi uthathwe "njengobanzi" kukho abasebenzisi okanye abalawuli bewebhusayithi, abanokuthi uququzelela ukhuphiswano lwazo zonke iindwendwe, nokuba inokucinga ngesipho (isipho esisipho) ekufuneka siziswe kuphela kwingingqi yengingqi. Ngesi sizathu, kuya kufuneka uqondise ukhuphiswano kuphela kubakhenkethi abahlala kwilizwe elinye kuba kwenye indawo, kuya kuba nzima kakhulu kuwe ukuhambisa oko bekubonelelwe.
«IP2Indawo»Ngaba lolunye uhlobo lokuqala esiza kulukhankanya ngeli xesha, sisixhobo esikwi-intanethi esiza kukunceda ufumane uluhlu lweedilesi ze-IP, oya kuthi kamva uzisebenzise ukudibanisa ifayile ye .htaccess.
Umfanekiso esiwubeke phezulu uya kusebenza njengomzekelo wento ekufuneka uyenzile; ukuba uyahamba khetha ilizwe ukuvimba okanye ukuvumela ukufikelela kwiwebhusayithi yakho, awudingi ukwenza naluphi na uhlobo lobhaliso. Ukuba ufuna ukusebenzisa amazwe aliqela kuya kufuneka wenze umrhumo wasimahla wedatha yakho. Ipharamitha eba sisitshixo sayo yonke into ikwinxalenye yokugqibela, kuba kuya kufuneka ukhethe phakathi:
I-Apache .htaccess Vumela
I-Apache .htaccess iyala
Ekugqibeleni kuya kufuneka ukhethe iqhosha elithi "khuphela" ukukhuphela uluhlu oluya kudityaniswa kwiwebhusayithi yakho nakwifayile ye-.htaccess usebenzisa iklayenti ye-ftp.
Iibhloko ze-IP zelizwe
"Iibhloko ze-IP zelizwe" sisixhobo esikwi-intanethi esinemisebenzi efanayo nesindululo sangaphambili, nangona apha uya kuba neendlela ezimbalwa zokongeza ezinokusetyenziswa ngabaphuhlisi bewebhu ngolwazi oluphambili.
Njengangaphambili, apha nawe unokukhetha i amazwe ofuna "ukuvimba okanye ukuvumela" ukufikelela kulwazi kwiwebhusayithi yakho; Emazantsi oluhlu lwala mazwe zezi zikhetho kunye nezinye ezimbalwa ekufuneka zikhethwe, ngebhokisi yazo. Ekugqibeleni kuya kufuneka ukhethe iqhosha elithi "Yenza i-ACL" ukufumana ulwazi oluya kuthi kamva ludibanise kwifayile .htaccess yewebhusayithi yakho.
Esi sixhobo sinonxibelelwano olunobuhlobo ngakumbi kunezinye iindlela ezichazwe apha ngasentla. Apha kufuneka ubhale igama lesizinda lewebhusayithi yakho kwaye ukhethe amazwe ofuna ukubhloka ukufikelela kuwo.
Le nkonzo ikwi-Intanethi ikho njengohlobo lomncedisi, ekufuneka uyilandele de ufumane ifayile oya kuthi kamva uyihlanganise kwi -htaccess yewebhusayithi yakho.
Isoftware77 IP kwindawo yogcino lwedatha yelizwe
Ukuba ngesizathu esithile awukwazi ukusingatha ezinye iindlela esele sizichazile ngasentla, sicebisa ukuba uzame ukusebenza nomsebenzi owakhelwe-ngaphakathiIsoftware77«, Oya kuyifumana kwibar yebar yangasekunene.
Apho kufuneka nje khetha ilizwe ofuna ukubhloka ukufikelela kulo kulwazi lwewebhusayithi yakho, emva koko kukhetho oluthi "CIDR" kwaye ekugqibeleni "Thumela". Ngazo zonke ezi zixhobo sizikhankanyileyo, ungavimba ngokulula imimandla eyahlukeneyo kwiplanethi ukuze bangabinakho ukufikelela kumxholo wewebhusayithi yakho. Ewe zikhona ezinye iindlela ezongezelelweyo esinokuthi sizisebenzise, ​​eziza kuxhomekeka kwiqonga eyakhelwe kulo iwebhusayithi yakho. Umzekelo, ukuba usebenzisa i-WordPress ungasebenzisa iplagi ekhethekileyo (njengelizwe iBhlokhi ye-IP) ezokukunceda wenze lo msebenzi, ngendlela elula kunayo nayiphi na enye indlela esele siyikhankanyile kwesi sihlandlo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Indlela yokuvimba ukufikelela kwiwebhusayithi yethu kwamanye amazwe
Ukungabikho kwibhokisi kunye nokuHlola i-TL-PA8010P PowerLine Kit
Sebenzisa ikhibhodi ye-LED njengesalathiso somsebenzi kwinethiwekhi yendawo